Mhinduro Yekukurumidza: Mvura Yakanyungudutswa Yakanaka Kune Betta Hove - BikeHike
musha » zvakasiyanasiyana » Mhinduro Yekukurumidza: Mvura Yakanyungudutswa Yakanaka Kune Betta Hove
Ndeipi mvura yaunoshandisa pabetta hove?
Zvakanaka here kushandisa mvura yakadirwa mutangi rehove?
Iwe unogadzira sei betta hove mvura?
Ndinogona kushandisa mvura yemubhodhoro kubheta yangu?
Iyo 7.6 pH yakachengeteka kune Bettas?
Imhandoi yemvura yaunofanira kushandisa mutangi rehove?
Ko Bettas inoda mvura yakaoma?
Kangani iwe unofanirwa kushandura Betta mvura?
Ko Bettas inoda Blackwater?
Unoita sei kuti mvura yemupombi ive isina njodzi kuhove?
Unogona kuisa betta hove mumvura yepombi isina conditioner?
Mabheta anoda munyu mumvura yavo here?
Ko Bettas inoda sefa?
Ndinodzikisa sei pH muhove dzangu dzebetta?
Ndeipi pH inodiwa nebettas?
Iwe haufaniri kushandisa mvura yakasvibiswa pakuchinja kwemvura mutangi rako rehove. Chikonzero cheizvozvo ndiko kushaikwa kwemaminerari kwemvura yakasvibiswa. Hove nezvirimwa zvakafanana zvinoshandisa zvicherwa mumvura, umo vanhu vanogona kuwana zvese zvavanoda kubva muchikafu. Kwete izvozvo chete, asi zvicherwa zvinodzora uye KUSIMBISA iyo pH mazinga mumvura.
Danho 1: Tanga ne 1 isina chinhu 1 Gallon Container yeMvura yekunwa. Nhanho yechipiri: Wedzera 2 Madonhwe eNovAqua Plus Pagaroni reMvura. Danho rechitatu: Wedzera 2/3 Tea Chipunu cheAquarium Munyu paGaroni Yemvura. Danho rechina: Wedzera 1 Drop yeAquari-Sol Per Gallon yeMvura. Nhanho yechishanu: Zadza Yasara yemudziyo neMvura yepombi. Nhanho 2: Kuwedzera Chikwereti:.
Mvura yemabhodhoro yemvura inodhura inodhura kune mvura yepombi, asi kusiyana nemvura yakasvibiswa, haisati yagadziriswa kubvisa zvicherwa uye zvinovaka muviri. Iyi mvura haizove neklorini mairi, kana, saka yakachengeteka kushandisa mumatangi ebetta chero bedzi pH mazinga achiwira mukuwirirana neakachengeteka mazinga ebetta.
Hove dzeBetta dzinoita zvakanakisa neine kwayakarerekera pH level ye7.0 asi inokwanisa kushivirira pakati pe6.5-7.0.
Yakajairika pombi yemvura yakanakira kuzadza iyo aquarium chero iwe uchiirega igare kwemazuva akati wandei usati wawedzera hove (iyo chlorine mumvura yepombi inouraya hove). Iwe unogona zvakare kutenga dechlorination mhinduro kuchitoro chedu.
Kana iwe uchinetseka nekuchengetedza aya mazinga mutangi yako nekuda kweiyo sosi yemvura iri kushandiswa, zvingave zviri nani kushandura kune yakasvibiswa kana kudzosera osmosis mvura kuti uve nekutonga kwakawanda pamusoro pemhando idzi.
Asi iyo pfupi vhezheni ndeyekuti diki mvura inoshanduka ye10-20% kamwe chete mazuva 7-10 ndiyo yakanakira hutano hwebetta yako. Izvi zvakare kufungidzira kuti uri kuita sefa. Unogonawo kuita shanduko yemvura ye20-30% kamwe chete pamavhiki maviri-2, asi shanduko diki dzemvura dziri nani pamamiriro emvura akagadzikana!Kubvumbi 3, 18.
Natural Habitat Betta hove dzinogara mumvura inononoka kufamba senge machakwi, tumvura diki kana kunyange minda yemupunga. Bettas anogara munzvimbo dzinodaidzwa kuti blackwater nharaunda umo mvura ine ruvara rwebrown. Matannins anodhaya mvura yakasviba, sekunge iwe uchiwedzera mvura inopisa mubhegi reti.
Pombi mvura. Mvura inoshandiswa nevachengeti vehove vazhinji inobuda mupombi yako! Nekudaro, haufanirwe kushandisa mvura yepombi mutangi rako rehove pasina kugadzirisa mvura kutanga.
Chero bedzi iwe usiri kuwandisa tangi yako, ipapo aquarium munyu yakachengeteka zvakakwana kune bettas. Nepo vamwe vanhu vachishandisa munyu we aquarium kurapa zvirwere zvinyoro, vamwe vanhu vanochiwedzera kune tangi yavo senzira yekudzivirira. Zvisinei, zvakakosha kuyeuka kuti bettas haidi aquarium munyu.
Hove dzeBetta dzinoda sefa here? â€‹Kusashandisa sefa kunoda kuzvipira uye basa rakawanda. Kushandisa sefa kuri nani kune Betta yako. Kana ukasarudza kusashandisa sefa kana uchichengeta Betta kuzvipira kukuru sezvo uchizofanira kuita mamwe mabhindauko makuru emvura pasvondo kuti mvura isaite chepfu.
Nzira yekudzikisa pH mumvura yemvura: Shandisa reverse osmosis (RO) kana deionized (DI) mvura kuti ugadzire pH inodiwa uye kupa buffering. Gara uchigadzirira mvura uye edza pH usati waiwedzera kune yako aquarium. Shongedza yako aquarium neakasikwa driftwood. Wedzera peat moss kana peat pellets kune yako sefa.
pH inofanira kuchengetwa iri pakati pe6.5 ne8. Mvura inofanira kuchinjwa nguva nenguva, kanenge kamwe chete pavhiki, kuti pave nechokwadi chokuti hove dzine mvura yakachena. Ona nzira yekudyisa hove dzako dzebetta pano.
Mhinduro Yekukurumidza: Mvura Yakanyungudutswa Yakanaka Kune Hove
Mhinduro Yekukurumidza: Inogona Betta Hove Kupona Mumvura Yakanyungudika
Unogona Kushandisa Mvura Yakanatswa Kune Betta Hove
Ini Ndinogona Kushandisa Mvura Yakanatswa Kune Betta Hove
Kurumidza Mhinduro: Unoshandisa Mvura Yakanyungudika Kune Betta Hove
Mhinduro Yekukurumidza: Unogona Kushandisa Mvura Yakanyungudutswa Kune Betta Hove
Ndinogona Kuisa Hove Yangu YeBetta Mumvura Yakanyungudika
Unogona Kushandisa Mvura Yakanatswa YeBetta Hove Tangi
Ndinogona Kushandisa Mvura Yakanyungudutswa Kune Hove yeBetta
Mubvunzo: Ndingashandisa Mvura Yakanyungudutswa Kune Hove Yangu yeBetta
Mhinduro Yekukurumidza: Yakawanda Sei Ph Inofanira Kuva Mumvura YeBetta Hove